By Abdiwahab Ahmed	 On Oct 12, 2020
Halyeygii khadka dhexe ee Manchester United ee Paul Pogba ayaa si rasmi ah usoo galay saaxadda tababarenimada, waxaana loo magacaabay tababare ku-meelgaadh ah.
Paul Scholes oo guulo badan lasoo gaadhay Manchester United waqtigii uu ciyaartoyga ahaa, waxa uu qayb ka noqday saamiileyaasha xiddigihii hore ee Red Devils ee Phil Neville, Ryan Giggs, Nicky Butt iyo David Beckham oo wada leh kooxda Salford City, taas oo shaqada ka caydhisay tababaraheedii Graham Alexander.
Kooxda ayaa shaacisay in tababare ku-meelgaadh ah uu noqonayo Paul Scholes oo ay u magacaabeen si uu usii wada kooxda inta tababare rasmi ah loo magacaabay, taas oo ka dhigan in markii labaad uu noqonayo tababare, waxaana uga horreysay kooxda Oldham Athletic oo sannadkii hore uu muddo 31 maalmood ah tababare u ahaa.
Salford City ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in uu shaqada ka tegay tababaraheedii Graham Alexander isla markaana ay saamayn degdeg ah yeelatay, taas darteedna uu si ku meelgaadh ah u beddelayo Paul Scholes.
“Paul Scholes ayaa tababaraha kooxda koowaad si kumeelgaadh ah usii ahaan doona inta ay kooxdu helayso macallin cusub. Warren Joyce ayaa hadda karantiil ku jira, waxaana marka uu awood u yeesho ee uu soo kabto uu Paul kula soo biiri doonaa shaqada tababarka.” Ayay kooxdu ku tidhi war-saxaafadeedkeeda.
Paul Scholes oo 11 koob oo Premier League ah kula guuleystay Liveprool, sidoo kalena laba Champions League, saddex FA Cup iyo laba League Cup ayaan la ogeyn haddii uu sii wadi doono shaqada tababarenimada iyo haddii uu joojin doono marka ay kooxdu hesho macallin kale.
Ganacsatadda Turkiga oo ka digtay dhibaatada ka dhalanka